Inkonzo yeFotona4Dpro egqibeleleyo kunye noMthengisi | Hongyu
Umgca we-SP ka-Phot line weenkqubo ze-laser ziyilelwe ukwenza lonke unyango olukhulu lwe-aesthetic. Ngokudibanisa ii-wavevel ze-laser ezimbini ezincedisayo zeFotona SP lasers zisebenza njengeenkqubo eziguquguqukayo, ezinemisebenzi emininzi ezinokuthi zenze uluhlu olubanzi lwezicelo kwi-aesthetics, utyando kunye nakwigynecology. I-Fotona's Nd: I-YAG ye-wavevelth iyasebenza ukufikelela kubunzulu bolusu, ngelixa i-Er: YAG wavelength ilungele ukucoca ukungafezeki komphezulu ukuveza iziphumo ezinomtsalane nezihlala ixesha elide.
Olona Nyango luPhezulu lwaBasebenzi
Umgangatho wegolide kaFotona Nd: YAG Itekhnoloji ye-laser ibonelela ngamandla kunye nokusebenza okudingekayo ukuphatha uluhlu olubanzi lwezicelo zobuhle, ukusuka ekuvuseleleni ulusu kunye nokunciphisa iinwele ukuya kumabala, unyango lwe-vascular nokunye okuninzi. I-Nd: YAG laser kumgca we-SP ixhasa isantya esiphezulu seFotona I-L-Runner Pro kwaye I-S-11 Nd: Iskena seYAG Isantya esiphezulu senkqubo, ukhuseleko kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kunyango lwendawo enkulu. Ngaphaya koko, uguquko kwimowudi ye-Fotona PIANO ye-ultra-long-pulse yenza ukuba kungene ngokunzulu kwi-Nd: YAG ngobushushu obuninzi ngelixa ngaxeshanye igcina i-epidermis ikhuselekile kwaye ikhululekile.
Umgca we-SP uphinde ukhulule amandla esizukulwana sesi-3 Er: YAG Ukuvela kwakhona kwesikhumba se-laser, ngokuchanekileyo, ulawulo lwe-micron layer-by-layer ablation control. Ngemisebenzi eqala ukusuka phezulu ukuya kuthi ga kwiipelisi ezinzulu, ukusuka kwinto engafakwanga ukugcwalisa ukuya ekuthambekeni ngokupheleleyo kunye nokususela kumhlaba opheleleyo ukuya ekubuyiseleni amaqhekeza, unyango lunokulungelelaniswa nayo nayiphi na imeko yesikhumba ukufezekisa iziphumo ezizodwa. Izisombululo ezinelungelo elilodwa lomenzi ezinje nge-VSP (i-Variable Square Pulse) yetekhnoloji kunye nefomathi yeFotona SMOOTH yamva nje zezimbalwa zeempawu ezenza i-SP ibe ngumda we-Er: Itekhnoloji ye-laser ye-YAG.
Indlela yeQCW yeZicelo zoPhando
Ukongeza kwintsebenzo ephezulu ye-infrared Er: YAG kunye ne-Nd: YAG lasers, umgca we-SP ubandakanya enye yezona infrared zinamandla QCW (Quasi Continuous Wave) Nd: YAG lasers ngotyando kwimarike. Ngezixhobo ezenziwe ngotyando ezenziwe nguFotona, umgca we-SP ubonelela ngeempawu ezifanelekileyo zomsebenzi kunye nokudityaniswa kwamaza e-infrared kuluhlu olukhethekileyo lokhetho lonyango.
I-QCW Nd: ubude be-YAG bulungele ukubonwa ngokubanzi kwezicelo zotyando, ukusika ngokuchaneka okuphezulu kunye nokusikwa kwethishu ukuya kwiinkqubo ze-endo eziphambili, ezinjenge-laser lipolysis, i-laser endovenous ablation, nokunye okuninzi. Uncediso oludityanisiweyo lwe-Er: I-YAG ye-wavevelth yenza ukuba kube nokuchithwa ngokuchanekileyo okuthe kratya, ngaphandle kokuqhekeka okanye ukuthungwa. Unyango luyakhawuleza kwaye alungeni kangako kunakwindlela yesiqhelo, kwaye ujongano olusebenzisekayo lomsebenzisi lwe-SP kunye nokuseta imemori okwenziwe ngokwezifiso kuya kwenza ukuba wonke umsebenzi wotyando ube lula kwaye ungabi noxinzelelo.
Izixhobo ezikhethiweyo zeGynecology
I-lasers ze-Fotona ze-SP ngabadlali beenkwenkwezi kwicandelo le-gynecology enkosi kumandla abo aqinisekisiweyo okwenza uluhlu olungachukumisiyo lweenkqubo ezingadibaniyo, ezingezizo ezomeleleyo kunye nentuthuzelo enkulu yesigulana, ukunciphisa ixesha lokuphumla kunye nokuphilisa ngokukhawuleza. Inkqubo ye- Er: YAG I-laser iluncedo kakhulu kunyango lwenzala yesibeleko kunye nelungu lobufazi, kunye nezilonda ze-HPV, imibala kunye neoplasias. Ngenxa yendlela ekhethekileyo yokubulala iintsholongwane inokusetyenziswa nakwizicubu ezosulelekileyo. Inkqubo ye- Nd: YAG i-laser wavelength isetyenziselwa utyando lwethishu ethambileyo, efana ne-laparotomy, laparoscopic kunye neenkqubo ze-hysteroscopic, kunye neenkqubo zokuthambisa izifo. Ngokudibeneyo, umgca we-SP ohambelana ne-laser wavelengths unika amandla ukubonwa okubanzi kwamathuba onyango, kubandakanya neendlela ezintsha ngokupheleleyo zokuphilisa ngokufanelekileyo iingxaki eziqhelekileyo zesini.
Yenzelwe ukuSebenzisa ngokuLula
Ukufezekisa ukugqibelela kwiziphumo zeklinikhi ngelixa ukonwabela isantya esingenakuthelekiswa nanto kunye nokusebenza kakuhle: umgca we-SP ubonakalisa intuitive, ekulula ukuyisebenzisa-ujongano kunye nokuseta imemori ngokwezifiso ukunceda zonke iingcali zisebenze ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Izinto ezenziwe ngesandla ezenziwe ngobuchwephesha, iindlela ekulula ukuzikhetha ezisebenzayo kunye nezinye izinto eziphambili ziqhubela phambili ukuphucula ukuchaneka kunye nokusebenza kwenkqubo nganye yeLotona yenkqubo yokusebenza kakuhle kweklinikhi kunye nolawulo olungalinganiyo ngexesha lonyango.
Iimodeli ezimbini onokukhetha kuzo
I-SP Dynamis yinkqubo ekhethekileyo enesakhono esineempawu ezigcweleyo ezibonelela ngeyona ntsebenzo iphambili kushishino u-Er: YAG no-Nd: YAG lasers, eyilelwe uluhlu olubanzi lwezicelo kwi-aesthetics nakwi-dermatology. I-SP Dynamis ikwabandakanya i-QCW Nd yoqhaqho eyongezelelweyo: I-laser ye-YAG ye-abo laser ablation, lipolysis, kunye nezinye iinkqubo zotyando.
I-SP Spectro -Inguqulelo ethe kratya kwaye engenamandla kangako ye-SP Dynamis, i-SP Spectro ibonelela ngobuchwephesha obufanayo Er: YAG and Nd: YAG laser technology (with optional optional QCW Nd: YAG) in a advanced advanced and uwezo Iphakheji eyilelwe ukubonelela ngoluhlu olupheleleyo lonyango lobuhle ngexabiso elikhethekileyo.
* I-QCW isemgangathweni nge-SP Dynamis kunye nokuzikhethela nge-SP Spectro.